musha ASIAN FOOTBALL STORI Caglar Soyuncu Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yakapedzisira Kugadziriswa pane November 25, 2019
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius nezita rezita rokuti "Matamba". Yedu Caglar Soyuncu Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yezvinoitika zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hupenyu uye Kukura kweCaglar Soyuncu. Image Chikwereti: Haberekspres, SkySports, TTF uye Instagram
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye siyana, kutaridzika zvakanaka adzivirira, uyo asingatyi uye anoshamisa akagadzirirwa mutambo wemazuva ano. Nekudaro, vashoma chete vevateveri venhabvu vanofunga Caglar Soyuncu's Biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino pasina imwezvezve ado, ngatitangei.
Caglar Soyuncu Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Nhoroondo Yemhuri uye Hupenyu hwepakutanga
Caglar Soyuncu akaberekwa pazuva re23rd yaMay 1996 kuvabereki vake Mr. na Mai Ömer Söyüncü muguta re İzmir, Turkey. Paakazvarwa, vabereki vake, avo vaitevera tsika dzemhuri yeTurkey vakaita chokwadi chekubereka mazita akanyorwa aine madhisiki madhisiki anogara achizivikanwa kune vatambi venhabvu vechiRungu. Iro zita ndi-Çağlar Söyüncü".
Ceglar Söyüncü ane mhuri yake anobva kuIzmir, iro rine guta guru reTurkey (guta rechitatu rine vanhu vakawanda muTurkey) yakambotongwa neHurumende yeRoma pasi pevakakurumbira ALEXANDER the Great aimbova neguta. Nekureva, zvakanaka kutaura kuti mudiki Ceglar Söyüncü (akafananidzirwa pazasi) anogona kuve nemidzi yake yemhuri uye mutsara kubva kune Mukuru Ishe weAsia- ALEXANDER GURU.
Caglar Soyuncu ane mhuri yake anobva kuİzmir, guta riri pamhenderekedzo yeTurkey yeAegean. Image Chikwereti: GoogleMaps uye Instagram
Kukurira mumhuri yepakati-yemhuri, Caglar Soyuncu akapedza hwakawanda hwehupenyu hwake hwepakutanga mu Menemen dunhu reİzmir padivi pevabereki vake uye nevamwe vemhuri. Akarerwa mumhuri inoremekedza chitendero chechiIslam uye tsika.
Caglar Soyuncu Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Kukura muguta remuguta reIzmir, dzidzo yevana yakanga isiri yeongororo yezvinyorwa zvekare uye zvimwe zvakasara zvehondo panguva yekutonga kweRoma neOttoman. Kune Caglar mudiki, zvaive zvese zvekutamba nhabvu. Izvi zvekuda kufarira zvakava chikamu chake, kunyanya mushure mezvidzidzo zvake.
Nekunakidzwa kwemutambo, Caglar yaizotamba nhabvu-zuva rose, kunyanya panguva yezororo pasina kubhinywa. Munguva pfupi, iye musiyano akasimudzira akafarira kutamba nhabvu nyanzvi, chisarudzo chakatsigirwa zvikuru nevabereki vake.
Mushure mekukurukurirana kwakawanda nevabereki vake uye nevadzidzisi vechikoro, Soyuncu mukuda kwake kuve iye akazvinyoresa naMenemus Belediyespor, chikoro chenhabvu chemuno munharaunda yeM menemen mudunhu reİzmir. Paanonyoresa, iye (pikicha pazasi) akaiswa somunhu anorova uye kwete mudziviriri izvo nyika zvakazoziva iye kuva.
Sangana naCaglar Soyuncu achangobva kujoina chikoro chake chekutanga chikirabhu. Image Chikwereti: Instagram
Caglar Soyuncu Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Menmen Belediyespor nhabvu academy yakapa Soyuncu mukana wekuratidza tarenda rake pamberi peAgents, Scouts, makochi uye maClub maneja. Kune vanoyemura, pakanga pasina kumbove nekupokana kukuru kuti iye ari kuenda munzira kwayo. Sezvakangoita vamwe vese vana mudhayari, Soyuncu akashuvira tamba mu İzmir Soccer League- nharaunda yenhabvu nhabvu yeIzmir, guta rake reTurkey.
Mushure memakore matanhatu achitamba neMan Men Belediyespor, Soyuncu mugore 2011 akaona ake nyanzvi dzekurota aine İzmir Nhabvu Nhabvu ichiuya kuitika. Akave nemuedzo wakabudirira neBucaspor, kirabhu inotamba mudunhu nhabvu yemutambo weguta rake, Izmir. Pakirabhu iyi, mudiki Caglar Soyuncu akakandwa kumashure nambuya uye gare gare, nzvimbo yekumashure iyo yaakaenderera mberi nayo kunyange panguva yehunyanzvi.
Caglar Soyuncu Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira
Isu reKudonhedza pasi Lower Le League kuitira kuti Simuka: Kune vakawanda vadiki vafambi venhabvu avo vakambogadzirirwa kudzidza kudzidzo (semuenzaniso. John Lundstram), yakanyanya kunaka nzira yekuchengetedza kupedza kana kuzivikanwa nhabvu scouts ndeyekuenda kuzasi kwakadzika nhandare. Ikoko, yekutanga-timu kusarudzwa inovimbiswa uye kutamisa inogona kuve nyore kutengeswa.
Ichi chakave chirongwa chakakwana chaCaglar Soyuncu uyo ​​akadonhedza Gümüşorduspor, maTurkey amateur nhandare uko akabatwa samambo, achichengetedza nzira yake mukupedza chikoro. Achangopedza kudzidza pachikoro ichi naGümüşorduspor, Söyüncü akawanikwa muchikwata cheAltınordu, kirabhu yakatamba mudanho repiri reTurkey nhabvu yeligi. Ichi zvakare kirabhu inozivikanwa nekujekesa vatambi vechidiki kune dzimwe nzvimbo dzeEurope.
Caglar Soyuncu aingova nemishoni imwechete paAltınord- KUTI TIYE KUTI TINOGADZIRA MUNYIKA YAKANAKA. Image Chikwereti: Kralspor
Caglar Soyuncu Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Simuka Mukurumbira
Mukumuka kwe 2016 / 2017 mwaka, Caglar Soyuncu akafamba munzira yake achipinda muEurope kusaina nechikwata cheGerman klabhu yeFreiburg. Chakanga chiri chisarudzo chaainzwa kuti ndicho chisarudzo chakanakira basa rake uye nekuvandudzwa kwake. Soyuncu akasvika pagirabhu panguva chaiyo, nguva SC Freiburg ichangokwidziridzwa kumakwikwi eGerman pamusoro-ndege (Bundesliga).
PaSc Freiburg panguva ye2016-17 mwaka, Caglar akatanga kuita hutsinye maitiro echiitiko chekudzivirira, achidzivirira chero anopikisa anouya. Iye yakatsungirira kukwikwidza ichikwikwidza kusvika mukurumbira mumwaka chete, ichiva imwe yenzvimbo dzinopisa kwazvo dzekudzivirira muGerman nhabvu neEurope zvakakura.
Caglar Soyuncu akasimudza manera paivhu reGerman, achiva mumwe wevanodzivirira kwazvo muBundesliga. Image Chikwereti: Irish Mirror, Zimbo, uye HITC
Kusimuka kwaCaglar Suyuncu kwakamuisa pachena muchikwata cheTurkey, kusimudzira kwakamuona achibatana neMan City, Bayern Munich, AS Roma neLeicester avo vese vakapfugama nekuda kwe siginecha yake. NdiLeicester uyo akazokunda.
Pa 9 Nyamavhuvhu 2018, Söyüncü akabatana naLeicester, kirabhu yakatsvaga sarudzo dzekuzvidzivirira mushure mekufungidzira kwakaenderera mberi pamusoro pemberi yemutambi wetsiva Harry Maguire. Kuenda kwa Maguire yakasiya vateveri veLeicester vazhinji moyo uye Caglar Soyuncu akava murume wekuporesa vakaora mwoyo, chiitiko chakasiya vateveri veLeicester vachibvunza; Ndiani anoda Harry Maguire?.
Pamberi peiyo 2019 / 2010 pakati-mwaka, Caglar Soyuncu akange atove gamba rechitendero cheLeicester. Hunyama hwake mukudzivirira yakamuwanira rumbidzo yakawanda kubva Brendan Rodgers.
Caglar Soyuncu akakurudzira kuve mutambi wepasi rose muPremier League. Image Chikwereti: DailyMail uye Instagram
Masimba ekudzivirira aSoyuncu, hutsinye, kutamba uye kutungamira mazita akaita basa rakakura mukubhururuka Leicester kusvika pachinzvimbo chechipiri muhafu yekutanga ye2019 / 2020 premier ligi mwaka.
Pasina mubvunzo, vateveri veLeicester uye isu vateveri venhabvu tiri padhuze nekuona imwe Carles Puyol uye Mat Hummels (mukugadzira) achipaza nzira yake kupinda mune tarenda repasi rose pamberi pedu chaipo. Chikuru Çağlar Söyüncü zvirokwazvo ndiye akanakisa pakati pemutsara wekugadzirwa kusingaperi kwevadziviriri vapakati vanobuda muEurope. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Caglar Soyuncu Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Ukama Hupenyu
Nekusimukira kwake mukurumbira uye kuhwina mwoyo yevateveri vepremier League, vateveri vazhinji vakaita runyararo mukuziva kana Caslar Soyuncu aine musikana kana mukadzi. EHE! Iko hakuna kuramba chokwadi chekuti chake rinotaridzika pamwe nekaitiro kake kekutamba zvaisazomuisa kumusoro kwese kwemukomana wevakadzi mukomana anoda.
Kumuona achisimukira mukurumbira, maFans mazhinji akabvunza- Ndiani musikana waCaglar Soyuncu? Image Chikwereti: IG
Mushure mekutsvagisisa kwakawanda pamusoro pewebhu, Zvinoratidzika Çağlar Söyüncü akaita nhamburiko yekuziva kusaratidza musikana wake kana mukadzi (ndiko kuti, kana atove mumuchato wakavanzika) panguva yekunyora.
Kune rimwe divi, tinoziva dzimwe nguva mutambo wetsiva wepasirose unogona kuregererwa kunyanya kana zvasvika pakusasanganisa mutambo zvisizvo nenyaya dzehukama. Ndichiri sVatambi ome vanoona kuderera kwavo nekuda kwezvinhu zvakaita sezera kana timu nyowani / system, zvimwe zvinobva zvaderera zvingave zvisiri kunze kwehukama hwakaipa. Nechikonzero ichi, vazhinji vanofarira nhabvu vangasarudza kuve vari muhukama kana kuratidza shamwari dzevasikana pane dzimwe nhanho dzinonetsa dzebasa ravo.
Caglar Soyuncu Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hwehupenyu
Kusvika pakuziva ğağlar Söyüncü Hupenyu Hwega hwaizokubatsira iwe kuwana mufananidzo uzere wehunhu hwake, kure nemunhu iwe waunoona wenguva dzose padanho rekuridza. Kutanga, iye mukomana akanaka, iye anoda kuratidza kuzvininipisa, kuve nemufaro uye kunyemwerera zvakanyanya (kazhinji kwete hunhu hwepakati hwemutambi wemazuva ano).
Caglar Soyuncu Chako Hupenyu kure neiyo Pitch. Mufananidzo Wekodhi: IG uye Twitter
Zvakare pahupenyu hwake hwega, Soyuncu yakawanda yemunhu anobuda uye ane hushamwari. Kure kwekutamba nhabvu panguva yezororo, unogona kumuwana nyore nyore mukambani vanhu vakasiyana. Soyuncu anosangana nevanhu vemakirasi ese, vamwe aanovabatsira mune zvemari pasina chaanodzosa mukudzoka.
Caglar Soyuncu anorarama anozvininipisa mararamiro- anoshandisa kushamwari uchizvibvisa. Image Chikwereti: Twitter
Caglar Soyuncu Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Lifestyle
Kana zvasvika kune mararamiro aCaglar Soyuncu, iye munhu anochengetedza chiyero pakati pekushandisa mari uye kuchengetedza. Pasina mubvunzo, mambure ake akakosha e12.5 Million Euro (10.8 Million Pound) uye kukosha kwemusika kwe18 Million Euro (15.5 Million Pound) zvirokwazvo anomuita miriyoni yemuridzi wenhabvu. Kuve mamirioni zvisinei hazvipfuure mukunakidzwa kwehupenyu hupenyu hunoonekwa nyore neruoko ruzere nemota dzinodhura sezvinoonekwa pazasi.
Caglar Soyuncu Mararamiro haazivikanwe neruoko rizere nemota dzinodhura panguva yekunyora. Mufananidzo weKwereti: Instagram, ratidza uye Gym4u
Nezve pfupiso yemararamiro ake, tinogona kugumisa kuti Caglar Soyuncu mushonga wekurarama zvisirizvo, (dai wango) panguva yekunyora.
Caglar Soyuncu Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri
Mhuri yaCaglar Soyuncu panguva yekunyora rarama yakazvimiririra uye yakaderera-yakakosha hupenyu muTurkey kunyangwe paparazzi inogara ichingova padanho uye nenzira dzakawanda dzekubatana neredhiyo.
Kuenda kuburikidza neyemagariro ake enhau, Caglar panguva yekunyora zvakaoma akaisa vabereki vake kana nhengo dzemhuri pane rake chimiro. Kunyange hazvo kuzivikanwa kwavo kuchiri chakavanzika, iye wepedyo kumhuri anoramba ari shamwari yake yepamwoyo uye shamwari yenyika Cenk Tosun.
Wepedyo weCaglar Soyuncu Mhuri ndiCenk Tosun, apo anochengetedza mitezo mikuru kubva mumeso eruzhinji. Image Chikwereti- Twitter uye IB
Pasinei kuita nhamburiko yekuziva kuti vadzivise chero kutarisa pachivande pahupenyu hwakavanzika, mune Caglar, pfungwa yebasa kune hama yake (s), hanzvadzi (s) nehama.
Caglar Soyuncu Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Kurumbidzwa kunotyisa kuna mambo aimbova mambo. Pane imwe nguva kana imwe, isu dzimwe nguva tinopomba mumweni uyo anotiudza isu senge munhu wavanoziva, rudyi?… Huye, isu takatora iyo ya Çağlar Söyüncü naAlexander the Great. Iwe uve mutongi!
Kufanana kunoshamisa kuripo pakati paCaglar Soyuncu naAlexander the Great. Image Chikwereti: Britannica uye FoxSportsAsia
His Football Idols: Kuve inoteedzerwa mitambo munyika yose, zviri pachena kuti vatambi vebhola vanoshanda sekurudziro kumamiriyoni evateveri vavo avo vanotarisa kwavari, vachivaona se zvifananidzo. Mu2016, Caglar Soyuncu akataura kuti zvifananidzo zvake zviviri vaive mutambi weSpain Carles Puyol uye wokuGerman wokumwe Mats Hummels.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Caglar Soyuncu Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusasarura. Kana iwe ukawana chimwe chinhu chisingaratidzika sezvakanaka, tapota tigovera icho isu nekupindura pazasi. Isu tichagara tichikoshesa uye nekuremekedza mazano ako.